Timoteo Nhoma a Ɛto So Abien 2:1-26
Fa asɛm no hyɛ nnipa anokwafo nsa (1-7)
Asɛmpa no nti, ɔde animia gyinaa amanehunu mu (8-13)
Kura Onyankopɔn asɛm mu pɛpɛɛpɛ (14-19)
Guan fi mmabunbere mu akɔnnɔ ho (20-22)
Sɛnea yɛne nokware no ho atamfo bedi (23-26)
2 Enti, me ba,+ ma adom a ɛwɔ Kristo Yesu mu no nkɔ so nhyɛ wo den; 2 na nea wote fii me hɔ a nnipa pii dii ho adanse no,+ ɛno na fa hyɛ nnipa anokwafo nsa. Ɛbɛma wɔn nso afata yiye sɛ wɔde bɛkyerɛkyerɛ ebinom. 3 Nsuro sɛ wubehu amane+ sɛ Kristo Yesu sraani pa.+ 4 Ɔsraani biara nni hɔ a ɔpɛ sɛ ɔsɔ nea ɔfaa no sraadi mu no ani a ɔde ne ho bɛhyɛ aguadi mu.* 5 Na agodi mu mpo, sɛ obi si akan a, wɔmfa abotiri no mma no, gye sɛ wasi akan no sɛnea ɛho mmara te.+ 6 Okuafo a wayɛ adwumaden no, ɔno na ɛsɛ sɛ odi kan di aba no bi. 7 Nea mereka yi, kɔ so dwen ho; Awurade bɛma woate nneɛma nyinaa ase.* 8 Kae sɛ, wonyan Yesu Kristo fii awufo mu,+ na na ɔyɛ Dawid aseni,*+ sɛnea asɛmpa a meka no te no.+ 9 Asɛmpa no nti na merehu amane a wɔde me ato afiase sɛ obi a madi bɔne+ yi. Nanso Onyankopɔn asɛm de, wɔnkyekyeree.+ 10 Eyi nti, mekɔ so de animia gyina biribiara mu, wɔn a wɔapaw wɔn no nti.+ Meyɛ saa, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso benya nkwagye a ɛnam Kristo Yesu so no, na wɔanya daa anuonyam nso. 11 Asɛm yi yɛ nokware: Sɛ ɛyɛ ampa sɛ yɛne no wui a, ɛnde yɛne no bɛtena nkwa mu nso;+ 12 sɛ yɛkɔ so de animia gyina mu a, yɛne no bedi hene nso;+ na sɛ yɛka sɛ yennim no a, ɔno nso bɛka sɛ onnim yɛn;+ 13 sɛ yɛanni nokware a, ɔno de, ɔyɛ ɔnokwafo, efisɛ ɔrentumi nyɛ biribiara a ɛne ne suban nhyia. 14 Kɔ so kae wɔn eyinom, na kyerɛkyerɛ wɔn* wɔ Onyankopɔn anim sɛ ɛnsɛ sɛ wɔko nsɛmfua ho, efisɛ ɛyɛ biribi a mfaso nni so koraa, na ɛsɛe wɔn a wotie no adwene. 15 Yɛ nea wubetumi biara fa wo ho ma Onyankopɔn sɛ obi a wogye no tom, odwumayɛni a ɔmfɛre n’adwuma ho,* na okura nokwasɛm no mu pɛpɛɛpɛ.+ 16 Nanso nsɛnhunu a etia nea ɛyɛ kronkron+ no, twe wo ho fi ho, efisɛ nsɛm a ɛte saa no* kowie bɔne ahorow pii mu, 17 na wɔn nsɛm bɛtrɛw te sɛ ɔyare bɔne. Wɔn mu bi ne Himeneo ne Fileto.+ 18 Saa mmarima yi aman afi nokware no ho, na wɔka sɛ owusɔre no aba dedaw,+ na wɔresɛe ebinom gyidi. 19 Nanso, Onyankopɔn fapem a ɛyɛ den no da so ara tim hɔ, na ahyɛnsode yi wɔ ho, “Yehowa* nim wɔn a wɔyɛ ne dea,”+ afei nso, “Obiara a ɔbɔ Yehowa* din+ no, ma ɔntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho.” 20 Ofi kɛse mu no, ɛnyɛ sika kɔkɔɔ ne dwetɛ anwenne nko ara na ɛwom, na mmom nnua ne dɔte anwenne nso wom bi. Wɔde bi yɛ nneɛma a ɛwɔ anuonyam, na wɔde bi nso yɛ nneɛma a enni anuonyam. 21 Enti sɛ obi twe ne ho fi nea enni anuonyam no ho a, ɔbɛyɛ ade* a wɔde yɛ nneɛma a ɛwɔ anuonyam, ade a wɔatew ho a ɛso wɔ mfaso ma ne wura, a wɔasiesie ama adwuma pa biara. 22 Enti guan fi mmabunbere mu akɔnnɔ ho, na di trenee, gyidi, ɔdɔ ne asomdwoe akyi, wo ne wɔn a wɔde koma a emu tew frɛ Awurade no. 23 Bio nso, twe wo ho fi nkwasea akyinnyegye+ a mfaso biara nni so no ho, efisɛ wunim sɛ ɛde ntɔkwaw ba. 24 Na ɛnsɛ sɛ Awurade akoa ko, na mmom ɛsɛ sɛ ɔyɛ nnipa nyinaa brɛbrɛ,*+ otumi kyerɛkyerɛ, otumi hyɛ ne ho so bere a obi ayɛ no bɔne,+ 25 ɔde odwo kasa kyerɛ wɔn a wɔtew atua.+ Ebia Onyankopɔn bɛma wɔn adwensakra, na wɔanya nokware no ho nimdeɛ a edi mu.+ 26 Ɛbɛma wɔn ani aba wɔn ho so, na wɔahu sɛ Ɔbonsam akyere wɔn* de wɔn reyɛ nea ɔpɛ,+ na wɔagye wɔn ho afi n’afiri mu.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔde ne ho bɛhyehyɛ ofie nsɛm mu.”
^ Anaa “bɛma woanya nneɛma nyinaa mu nhumu.”
^ Nt., “ɔyɛ Dawid aba.”
^ Nt., “di ho adanse frenkyemm kyerɛ wɔn.”
^ Anaa “odwumayɛni a ɛnsɛ sɛ ɔfɛre hwee ho.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wɔn a wɔka saa nsɛnhunu no.”
^ Anaa “anwenne.”
^ Anaa “ɛsɛ sɛ ɔtɔ ne bo ase ma nnipa nyinaa.”
^ Anaa “akyere wɔn animono.”